nepali youn katha : नगरकोट जाने हो ? - Nepali Sex Story
Home chikeko katha nagarkot Nepali Sex Story in Nepali Nepali Youn Katha yaun katha youn katha यौन कथा सेक्सी कथा nepali youn katha : नगरकोट जाने हो ?
दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यसमाथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको । त्यो उखुम गर्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन । बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं ।
एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ - त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं ।
Also Read Bhauju lai mero lado chusna lagaye (bhauju chikeko nepali katha)
मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुंदै जाने क्रममा भएका रहर लाग्दा योनिक्षेत्रका रौंहरु मुसार्दै थिएं । वाताबरणमा भएको गर्मी र मेरो रंगीन कल्पनाले उमारेको जोसको संमिश्रणले गर्दा मलाई मेरो योनि भित्रबाट ज्वालामुखी विष्फोटन भएर लाभाहरु छरिन्छ कि जस्तै लाग्दैथियो । विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो योनिको मुखभागबाट निस्किएको चिल्लो चिप्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै गर्दा ढोकाबाहिरबाट आमा कराउनु भयो , " ए ! सानी , आज त बाख्राहरु मरिसकेहोलान ।
जा जा पानी लगेर दे अनि सिँयालमा सारेर आईज । " मेरो एकाग्रतामा खलल पुर्याउंदा मलाई झनक्क रिस उठ्यो तर ‘कहाँ छन बाख्रा ?’ मैले सोधें । " खै कोनि त कहाँ छन ? बिहान लगेर कहाँ खुटेकि थिईस ? " आमाको जवाफले पो थाहा भयो बाख्राहरु त म आफैंले लगेर बिकाशहर्को खेतमा खुटाएर आकि थें । " लु जा झट्ट , मरिसकेहोलान बाख्राहरु त ।" आमाको आवाज क्रमश मधुरो हुंदै गयो सायद मेरो ढोकाबाट फर्किसक्नु हुंदैथियो । यो तातो घाममा बाख्राहरु भएको ठाउं सम्म पुग्नु पर्ने हुंदा मरे जतिकै लागेको थियो मलाई तर विकाशलाई त्यहाँ भेटिन सकिने संभावनाले मलाई जाँगरिलो बनायो ।
धेरै पटक एकान्तमा भेट हुंदा मैले जानी जानी स्तनहरु उसको कुम छाती तिर रगडेर प्रणयको खुल्ला निमन्त्रणा दिईसकें तर उसलाई कुनै असर हुंदैन । सानै देखि नदेखेको , नजानेको भए म विकाशमाथी यौनाङ्ग छैन कि भनेर शंका गर्न सक्थें तर सानोमा संगै खेल्दा हरेक पटक विकाश आफैं अघि सरेर लोग्नेको भुमिका निभाउंथ्यो भने मलाई स्वास्नीको भुमिका निभाउन बाध्य पार्थ्यो । हामी निर्धक्क भएर बाख्राका पाठापाठीहरु उक्लाउक्ली गरे झैं खेल्थ्यौं । भातपकाई ( भाँडाकुटी ) बाट शुरु हुने हाम्रो बालखेल संधै लोग्ने स्वास्नी भएर लोग्ने स्वास्नीको भुमिका निर्वाह गर्दै बच्चा ( झुम्राको ) जन्मिउञ्जेल सम्म खेल्ने गर्थ्यौं । सानोमा यस्ता सबै खेल खेल्न सिकाउने मेरो नायक आज कसरी यति धेरै सोझो भयो ? मनभरी बिकाशलाई बोकेर म एकसुरमा हिंड्दै गर्दा विकाशकै आवाजले म झस्किएं -’ ए! सानी , तिम्रो बाख्राहरु यहाँ ल्याईदिएको छु , पानी पनि ख्वाईदिएं है ।
‘ म बाल्यकालको स्मृतीमा हराईरहेकोले होला एकपटक त विकाशले ए! सानी खेल्न आउ न भनेको जस्तो लाग्यो तर यथार्थमा विकाशले भनेको मैले बुझिहालें । गाउँ देखि निक्कै पर हम्मेसि मान्छेहरु आईनपुग्ने स्थानमा उसकै खेतको बिचमा भएको घना बाँसघारीको सिँयालमा उसका अनि मेरा पनि बाख्राहरु सारेर किताब पढ्दै बसिरहेको थियो विकाश । ढुंगो खोज्दा देउता मिल्यो भन्दै म उ भएनेर गएं । उ किताबमै मस्त थियो । बाल्टीको पानीले खुट्टामा लागेको धुलो पखाल्दै बोल्ने बहाना झिकें - ‘ कति पढ्छौ विकाश ? अल्छि लाग्दैन ? ‘ ‘ लाग्दैन है । ‘ किताबबाट नजर नहटाई सोझो जवाफ दियो उसले । ‘उफ कति साह्रो गर्मी । तिमीलाई गर्मी भएन ? ‘ मैले उसको ध्यान भंग गर्ने हेतुले कम्मरमा बाँधेको तौलिया खोलें । मलाई बिश्वास थियो यदि उसले हेर्यो भने मेरो पातलो म्याक्सी भित्र माथी छातीतिर आकाश छुने रहरले चुलिएका दुई टाकुराहरु र तलपट्टी अरुणको गल्छि अनि त्यहाँको बनस्पती जगत स्पष्ट देख्नेछ ।
म उसको नजिकै बस्नलाई तौलिया ओछ्याउने उपक्रममा लागें । उसले मलाई हेर्यो र तुरुन्तै भन्यो , ‘ छि ! तिमी त यत्री ठुलि भएर पनि कट्टु नलाएकि ? ‘ सरलपनाको पनि यौटा हद हुनु पर्ने हो तर मेरो योनि र त्यस वरीपरीका रौंहरु स्पष्ट देख्दा पनि उसमा कुनै उत्तेजना आएन क्यार । उसको नजर फेरी किताबमै अडियो । म तौलियामाथी उसको छेवैमा बसें र भनें ,’ तिमीलाई यो सुकेको झारले बिझाएन ? यो तौलियामा बसन ।’ बटन खुल्ला भएको मेरो म्याक्सीबाट बाहिर निस्कन खोज्दै गरेका दुबै स्तनहरुले विकाशलाई ल आउ खेलौं भन्ने अपिल गर्दैथिए । ‘ नाईँ अब म घर जान्छु , तिमी नै बस । ‘ किताब बन्द गरेर उठ्न खोज्दै थियो विकाश । मैले हत्तार उसको हात समातेर आफु तिर तानें म यौटा खुट्टा सिधा अगाडी तन्काएर र अर्को खुट्टा तेर्सो पारेर घुंडादेखि केहि खुम्च्याएर बसेकि थिएं ।
आधा उठिसकेको अवस्थाबाट सम्हालिन नपाउंदै विकाश मेरो काखमा मुख जोतेर लड्यो । उसको तिखो चुच्चो नाक म्याक्सी बाहिरबाटै मेरो योनिको माथ्लो भागमा धस्सिएको मिठो महसुस गरें मैले । सायद उसले पनि पहिलो पल्ट मेरो यौवनको मादक सुगन्धको अनिभुती गर्यो होला । उसले बिस्तारै टाउको उठाएर भन्यो - ‘ तिमीलाई त लाज शरम केहि छैन सानी । अब त हामी ठुला ठुला भै सक्यौं त । कहाँ सानोको जस्तो गरेको ? ‘ मैले विकाशको हात छोडेकै थिइनं । छोड्यो भने उ भाग्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । म विकाश संग सानोमा गरेका सबै कृयाकलापहरु दोहोर्याउन चाहन्थें । उसैले सानोको कुरा झिक्दा मलाई अझ अघि बढ्न सहज भयो र भनें - ‘ अनि के त ? सानोमा म अर्कै तिमी अर्कै थिईनौं त , सानोमा गर्न हुने अहिले गर्दा चैं के हुन्छ ? ‘ विकाशको अनुहार लाजले रातो भएको थियो ।
मेरो अनुहारमा पनि उत्तेजनाको लाली थियो होला । मेरो हातबाट आफ्नो हात छुटाउने प्रयत्न गर्दै विकाशले भन्यो , ‘ सानोको जस्तै अहिले गर्दा तिमी सांच्चैको आमा भयौ भने नि ? अब त सानोको जस्तो झुम्राको नानी जन्मिदैन त ? ‘ ‘ जन्मे के त ? बिहे गरेर बसौंला नि । कि तिमी मलाई बिहे गर्दैनौ ? म त तिमी बाहेक अरु संग त मरे नि बिहे गर्दिन । तिमीलाई त मेरो मायापनि लाग्दैन कि के हो ? ‘ रिसाएको नखरा पार्दै मैले भनें । विकाश अवाक भएझैं मेरो आँखामा हेर्न लाग्यो । उसको अनुहारमात्र हैन कानहरु पनि राता राता भएका थिए । उ आगोको समिप परेको नौनी झैं पलपल पग्लिंदो थियो । लाजले रातो भएको उसको अनुहारमा क्रमश उत्तेजनाको रंग थपिंदै थियो ।
बिस्तारै उसले मेरो गालामा हात राखेर कपालका केश पन्साउंदै भन्यो ,’ लाग्छ नि सानी , धेरै धेरै लाग्छ तिम्रो माया तर माया लाग्छ भनेर जताततै पोख्दै हिंड्नु हुंदैन नि , हैन र ? ‘ बिकाशको आँखामा कताकता आँशु छचल्किएको थियो । उसले त मलाई चोखो माया साँचो अर्थमा गर्दोरहेछ । मैले पो बुझ्न नसकेको रहेछु उसको मायालाई । त्यसबेला मलाई आफ्नो उत्ताउलोपना देखेर एकैछिनको लागी आफैं संग एकैसाथ लाज र घिन लागेर आयो । मेरा आँखाभरी आँशु भरीए । त्यती धेरै जोश बोकेर विकाश संग यौन कृडामा लिप्त हुने अभिलाशा बोकेर आएकि मैले विकाश संग माफ माग्न पनि सकिनं । सायद उसले मेरो आँखाले गरिरहेको याचना बुझ्यो होला दुबै हातली मेरो दुबै गालामा भएको केशहरु पन्साउंदै लगेर कान मुन्तिर कसिलो गरेर समाई मेरो ओठमा चुम्बन गर्यो ।
मेरा हातहरु विकाशको पाखुरा मुनितिरबाट पिठ्युँमा पुगेर उसलाई कस्न खोज्दैथिए । चुम्बनको क्रम केहिबेर चलिरह्यो । हामीदुबै एक अर्काको क्रमश दुबै ओठहरु चुस्नेक्रममा थियौं । मैले आफ्नो तल्लो ओठ उसको दुबै ओठको बिचबाट फुस्काएर फुस्फुसाएको स्वरमा उस्लाई थ्याङ्क यु आई लभ यु भनें । उस्तै स्वरमा बिकाशले पनि आई लभ यु टु भनेर मेरो जिब्रो माग्यो । मैले आफ्नो जिब्रो उसको मुखभित्र छिराएं । बडो तन्यमताका साथ विकाशमेरो जिब्रो चुस्न लाग्यो । जिब्रो चुसाउनुको आनन्द मलै पनि भै रहेथ्यो । पालैपालो हामी एक अर्काको जिब्रो चुस्तै गर्दा बिकाशको हात मेरो स्तनमा खेल्न लागिसकेको थियो । मलाई केहि हिम्मत बढ्यो र अनुरोध गरें , ‘विकाश आज एक पटक सबै गरौं न प्लीज । ‘ हामी दुबै जिब्रो चुस्ने क्रममा तौलियामाथी लडिसकेका थियौं ।
अहिले बिकाशको मुख म्याक्सीबाट जबर्जस्ती बाहिर निस्किंदै गरेको मेरो दाईने स्तनमा थियो । यौटा हातले उसले मेरो घिचुकमा कपालको केश मुठ्याएको थियो भने अर्को हात मेरो योनि क्षेत्रतिर डुलाउंदै थियो । यस्तोबेलामा सायद शरिरलाइ दिमागले नियन्त्रणमा रख्न सक्दैन होला मेरो हात विकाशको घुँडासम्म आउने हनुमाने कट्टुभित्र पसेर कडा लिङ्ग संग खेल्न लागे । सानोमा देखेछोएको भएपनि जवानभएपछि कल्पना मात्र गरेको विकाशको लिङ्ग मेरो कल्पनामा झैं लम्बाई र गोलाईमा थियो । सानोमा उसिनेको सखरखण्डको त्यान्द्रो जस्तो देखिने बिकासको तुरी अहिले मेरो मुठ्ठीमा अटाई नअटाई थियो । मैले मुठ्ठीमा नापीरहेको उसको लिङ्ग मेरो योनिभित्र सम्म छिराउन पाएहुन्थ्यो जस्तो लागेर मैले पुन अनुरोध गरें तर मेरो अनुरोधको उल्टो असर परे झैं विकाश हठात मेरो शरिरबाट अलग भयो र मैले तानेर तल पुर्याईदिएको कट्टु माथी सार्दै बोल्यो , ‘ अहिले नै गर्ने र सानी? कोहि आए भने? ‘ म पनि अलि सम्हालिएर यताउता हेरें ।
त्यहां वरपर बाँधेका बाख्राहरु हामी के गरिरहेछौं भन्ने जिज्ञासा भएझै हामीलाई हेरिरहेका थिए । अलि पर्तिर मेरो घरको बोको विकाशको घरको पाठीमाथी उक्लेर डल्लो पर्दैथियो । ‘ को आउँछ र यहाँ ? ‘ मैले प्रतिप्रश्न गरें र उठेर एकै ठाउँ गुजुल्टिएको तौलियालाई फेरी सजिलो गरि ओछ्याउन थालें । तौलिया ओछ्याउनको लागि म आधा निहुरिएको अवस्थामा हुंदा पछिल्तिरबाट विकाश आएर उसको लिङ्ग मेरो योनिभागमा पर्ने गरी रगड्न थाल्यो । उसको दुबै हात मेरो स्तनमा खेल्न लागेका थिए । म घुंडा टेकेर उ भएतिर फर्किएं र उसको लिङ्ग हातमा खेलाउन थालें । मैले एकाध पटक ब्लु फिल्महरुमा केटीहरुले लिङ्ग चुसेको अनि केटाहरुले योनि चाटेको देखेको थिएं । अबेरै नगरी मैले विकाशको लिङ्ग आफ्नो मुख भित्र हालें र लालीपपझैं चुस्न थालें । ‘ अरे सानी , यो के गरेको ? ‘ विकाश भन्दैथियो ।
सायद उसले म यती अगाडी बढ्न सक्छु भन्ने सोचेको थिएन । केहिबेर सम्ममात्र विकाशको लिङ्ग मेरो मुखभित्र रगडिएको के थियो मैले आफ्नो किलकिलेमा तातो पानीको सिर्का महसुस गरें साथै विकाशको मुखबाट आह!!! को आवाज निस्किएको सुनें । क्रमश बिकाशको लिङ्गले भातको माड जस्तो बाक्लो तातो चिप्लो तरल पदार्थ छाड्न थाल्यो । उसको बिर्यको केहि भाग मेरो मुखभित्र के पसेको थियो मलाई वाकवाकी आयो । मैले विकाशको लिङ्ग आफ्नो मुखबाट बाहिर निकालें र उसको विर्य ओकलेर फालें । पुरानो जमानाको टेको कलमले झै छादीरहेको विकाशको लिङ्ग आफ्नो योनिमा छिराउन खोज्दैथिएं म । ‘ मलाई त भयो सानी ।’ बिकाश बोल्यो । उ पुरै स्खलन भै सकेको थियो । म भने प्यासी नै थिएं ।
विकाशले मलाई समाएर उत्तानो पारेर लडायो र आफु म माथी घोप्टो परेर चढ्यो । मेरो ओठमा एकपटक म्वाईं दिएर उ मेरो स्तनमा झर्यो र दुबै स्तनका मुण्टो क्रमश चुसेर फेरी उ मेरो योनि भागमा सर्यो र दुबै हातका बुढिऔंलाहरुले मेरो योनिको दुई गालाहरु च्यातेर मेरो योनि चाटीचुटी पारेर चुस्न थाल्यो । यौनकृयामा हामी मान्छेहरु पनि पशुहरु भन्दा कम कहाँ रहेछौं र ? बरु पशुभन्दा अझ तल झरेर हामी दुई रतीरागको धुँवा उडाईरहेथ्यौ । सायद पहिलो प्रयास भएर होला विकाश केहि छिट्टो स्खलित भएको थियो मेरो पनि हालत त उस्तै थियो । विकाशले च्याती च्याती मेरो योनि चुस्ता म पनि धेरै बेर कहाँ टिक्न सकें र ? बर्खेखेतको समाहा फुटेर लेदोपानी बगेझैं म पनि एकैछिनमा तौलियामाथी छ्यालब्याल भएर पोखिएं । केहिबेर सम्म हामी एकार्काको अँगालोमै बांधिईरहयौं र उठेर दुबै सम्हालिएर बस्यौ ।
‘ विकाश हामीले गर्ने काम त गरेनौ नि ?’ मैले सोधें । ‘ के भयो त? गरेको भए तिम्रो यहाँ बच्चा हुन्थ्यो नि त । ‘ मेरो पेट सुम्सुम्याउदै विकाशले भन्यो , ‘ तिमी कुमारी आमा भयौ भने नि ? ‘ विकाशको कुरा ठिकै थियो । कुमारी आमा भएर घरपरिवारको छि छि र समाजको दुरदुर हुंदै सबैले थुकेको सम्झंदा त आज झैं प्रत्येक पटक यसैगरी उम्लिएको जवानी तौलियामै पोख्नपाए जाती हुन्छ जस्तो लाग्यो । निक्कै बेर पछि अर्को पटक ब्यवस्थित भएर ढाल सहित यस्तै भेटघाट गर्ने बाचा गरेर म घर फर्कें विकाशपनि आफ्नो बाटो गयो । एउटै गाउँ भएपनि विकाशको र मेरो घर अलि टाढै पर्थ्यो । निक्कै दिन भएको थियो हाम्रो भेट नभएको । विकाशले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने थाहा पाएदेखि मेरो भुईँमा खुट्टानै थिएन ।
मन पनि सिमलको फूल जस्तो ( भुवा हो हुनत फूल भन्छौ हामी ) हलुँगो भएको थियो । त्यसै नाचुँ नाचुँ जस्तो लाग्थ्यो । विकाशलाई भेट्न जान मन लागिरहेको थियो त्यसैले धेरै अगाडी देखि म संग रहेको विकाशको कापी पुर्याउन जाने बहाना बनाएर जाने विचार गरें र ऐना अगाडी बसेर सिँगारिन थालें । मलाई सिँगार गर्नै पर्ने त थिएन तर पनि आफ्नो मनपर्ने मान्छे संग जाँदा अलि राम्री हुन मनलागेको थियो । अनुहारको सिँगार पटार सकेर म ऐनामा हेर्दै आफ्नो स्तन खेलाउन थालिसकेछु । म किन यस्ती बहुलाई भएकि ? आफैं छक्क पर्छु । सायद मेरो प्रकृती नै यस्तो हो कि ? अलिकती फुर्सद पाएंभने म किन यौनाङ्गहरु खेलाउंछु ? विकाशले भनेझैं म उम्लिएर पोखिन बेर छैन । विकाशको कुराको सम्झनाले सम्हालिएर म विकाशको घर गएं । सुनसान थियो घर । सायद कोहि थिएनन ।
म फर्कन लाग्दै गर्दा विकाशकि दिदीले बोलाउनु भयो , ‘ अरे सानी ? किन आकि थ्यौ ? फेरी फर्कन लाग्यौ त ? ‘‘नमस्ते कुसुम दिदी ‘ नमस्ते गर्दै म बोलें , ‘ म त कसैलाई नदेखेर जान आँटेकि । यो विकाशको कापी दिनु थ्यो र । विकाश कहाँ छन? ‘‘ ए ! विकाश र बाबा त हिंजो पुने जानु भयो त । हाम्रो विकाशलाई पुनेमा पढाउने अरे । साँच्चि तिमी कहाँ पढ्ने ?’ नमस्ते फर्काउंदै कुसुम दिदीले सोध्नु भयो । हाम्रो प्लस टु ( दश जोड दुई ) को पढाई सकिएको थियो । भर्खरै परिक्षाफल निस्किएर अब अगाडी कहाँ पढ्ने भन्ने कुरा हुंदै थियो ।‘ खै दिदी , बुबाले त काठ्माण्डौ पठाउंछु भन्नु भएको थियो । उतै पढ्छु होला आण्टीको मा बसेर । ‘ मैले भनें , ‘ अनि दिदी म संग त बिकाशले काठ्माण्डौ नै पढ्ने भन्थे त ? ‘‘ भन्छ नि त्यसले । बाबाले त्यसलाई पुनेबाट एम बि ए गराउने भन्नुहुंदैछ । बि एम सि सि मै पढ्छ होला त्यो पनि । ‘ त्यही ब्रेहान महाराष्ट्र कलेज अफ कमर्समा कुसुम दिदीले पनि पढ्नु भएको थियो ।
अहिले बिहे भै सकेर साउने पानी छल्न आउनुभएको थियो दिदी । नाम अनुशार नै राम्री हुनुहुन्थ्यो कुसुम दिदी । सानोमा हामीलाइ ट्युसन पढाउनु हुन्थ्यो । कतिपल्ट विकाश र मलाई लोग्ने स्वास्नी भई खेल्दै गर्दा रंगेहात पक्रनु भएको पनि थियो । पछि सम्म पनि मलाई भेट्दा के छ बुहारी भनेर जिस्काई रहनुहुन्थ्यो त्यसैले म कुसुम दिदीको नजिक त्यती पर्दिनंथें । कुसुम दिदी अझै के के भन्नु हुंदैथियो तर यता मेरो मनमा भने चट्याङ्ग परिसकेको थियो । काठमाण्डौमा पढ्न गएपछि स्वतन्त्र भएर विकाश संग घुम्न पाउने कल्पनामा डुब्न थालिसकेकि मलाई दिदीको खबरले मर्माहत बनायो । म टोलाएको देखेर होला दिदीले के भयो सानी , किन टोलाएकि भन्नु हुंदै थियो । म केहि हैन दिदी भन्दै बिदा भएर घर फर्कें । मलाई विकाश संग बेस्करी रिस उठेको थियो ।
आवोस न अनि जानेकि छु भन्दै म मुर्मुरिरहेकि थिएं तर विकाश पुनेबाट फर्किनु अगाडी नै मलाई पनि काठमाण्डौ जानु पर्यो । म पनि बुबासंग काठमाण्डौ गएं । मैतीदेवीको यौटा गल्लीभित्र आण्टीको घर थियो । म पहिले आउंदा आण्टीहरु महाराजगंजतिर बस्नु हुन्थ्यो । मलाई यो काठमाण्डौ पहिले पनि मननपरेको यो पाली पनि मन परेन । कसरी यस्तो ठाउँमा बसेर पढ्नु होला ? कि पछि बस्दै गएपछि राम्रो लाग्छ कि ? मैले पढ्ने कलेज चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा थियो । कलेज शुरु भएपछि हरेक बिहान मैतीदेवी मन्दिर अगाडीबाट कलेजको बसमा जानु पर्ने ।सबैकुराको निधो भएर भोलिपल्ट बिहान हामी घर फर्किने भएका थियौ । अघिल्लो साँझ म मौका छोपेर एक्लै घुम्न निस्कें । मलाई केहि कण्डोम किन्नु थियो ।
हुनत विकाशले अबको भेटमा म कण्डोम लिएर आउंछु भनेको थियो तर म भन्दा सोझो छ विकाश । नल्याएर पछि मलाई त किन्न लाज लाग्यो सानी भन्न सक्छ । मैले पनि किनिंन र उसले पनि ल्याएन भने उ संगको मेरो संभोगको ईच्छा अर्को भेटमा पनि तुहिएर जान सक्छ ।साँझको बेला जुन पसलमा पनि मानिसहरुको धुईरो थियो । धेरै मानिसहरु भएको पसलमा गएर कण्डोम माग्न मलाई कता कता कुरि कुरि लाग्दै थियो तर मेरो लागि ग्राहकको घुँईचो नभएको पसल कहाँ हुन्थ्यो र ? जे परोस , म नकिनि नछाड्ने अठोटमा पुगें र अलि सुनसान देखिने यौटा पसलमा छिरें । पसले अलि उमेर ढल्केको काठमाण्डौकै रैथाने जस्तो देखिन्थ्यो । बाहिर पट्टी बेञ्चमा यौटा युवक चुरोटको मज्जा लुट्दै थियो । सायद पसले र त्यो युवक बात मार्दै थिए ।‘ साउजी , मलाई एक प्याकेट कण्डोम दिनुहोस न प्लीज । ‘ मैले पसलेतिर मुखरित भएर भनें ।
रेडियो ट्युनिङ्ग गर्दै पसले कुनै समाचार खोज्दैथियो वा एफ एममा गीत खोज्दैथियो , झस्किएर अलि ठुला ठुला आँखा ( भन्छन नि विस्फारित लोचन ) बनाएर म तिर हेरेर बोल्यो , ‘ हजुर के भन्नु भो टपाईंले ? ‘ उसको अनुहारको भावले प्रष्ट पार्थ्यो कि उ अचम्ममा परेको छ अनि मलाई जिस्काउने दाउमा पनि । ‘ मैले भने कि , मलाई एक प्याकेट कण्डोम दिनुहोस । ‘ दोहोर्याएं मैले ।‘ ए हस् ‘ बनावटी नम्रताको साथ भन्यो उसले , ‘ तर टपाईं ट बे भको जस्टो डेखिडैन । हेर्डा अझै कुमारी डेखिन्छ । ‘पसलेको कुराले मेरो रिसको पारो एकैचोटी माथि चढ्यो । म अलि कडा भएर बोलें , ‘ हेर्नुस साउजी , तपाईं मतलब भन्दा बाहिर जानुहुंदैछ । म कुमारी हुँ या बिवाहिता हुँ या बिधवा हुँ त्यो संग तपाईलाई के को टाउको दुखाई ? तपाईँ पसल थापेर बस्नु भएको छ र पसलमा कण्डोम पनि बेचिन्छ भनेर यत्रो बोर्डपनि राख्नु भएको छ ।
जब बेच्न तपाईं बस्नु भएको छ भने ग्राहकहरु किन्न आउंदा फेरी के को आपत्ती ? ग्राहकहरु कुमारी हुन कि बिवाहिता हुन कि बुढि हुन ; बेच्नेले रिपोर्ट त राख्नु पर्दैन होला नि ? ‘ पसले कण्डोमको प्याकेट तिर लम्कंदै थियो । बेञ्चमा बसेको युवक राम्रै चित्त बुझेझैं गरेर हाँस्यो र भन्यो , ‘ सहि कुरा हो । तपाईंलाई के आपत्ती नि साउजी , जस्लाई जे आवस्यकता हुन्छ उसले त्यहि किन्छ —- ‘ चिन्नु न जान्नु घचेटीमाग्नु । उसको कुरालाई बिचैमा काटेर म उ तर्फ लक्ष्य गर्दै बोलें , ‘ धन्यवाद महाशय । तर तपाईं चुरोटकै मज्जा लिंदै गर्नुहोस । हाम्रो बिचमा तपाईंको आवश्यकता छैन । ‘ उ चुप लाग्यो तर यता साउजीको घैंटोमा घाम लागेझैं पसल थर्काउंदै कुनै रेडियो नाटकमा राक्षस हाँसे झैं हांस्न थाल्यो ।
एकैछिन त मलाई त्यहाँ हाँसोको पात्र बन्दैछु कि जस्तो पनि लाग्यो । मलाई त्यहाँबाट कन्डोम लिएर छिट्टो उम्कन पाए हुन्थ्यो जस्तो भएर पसलेलाई अलि छिट्टो गर्न भनें । पसलेले कन्डोमको प्याकेट म तर्फ बढाउदै भन्यो , ‘ ल लिनुहोस बैनी , मैले ट टपाईँलाई नराम्रो भन्न खोजेको ठिंन टर टपाईँ ट टेसै रिसाउनु भो टर आज सम्म मेरो पसलमा केटी आर कण्डोम किनेको मलाई ठा ठेन । ‘पैसा तिरेर मैले कण्डोमको प्याकेट आफ्नो ह्याण्ड ब्यागमा राख्दै भनें , ‘ धन्यवाद । आज देख्नु भयो नि हैन ? धन्दा नमान्नुस मैले कण्डोम किनें भनेर कसैले तपाईंको पसल अगाडी टायर बाल्दैन न तपाईंले केटीलाई कण्डोम बेच्नु भयो भनेर कसैले तपाईंको पसल बन्द गर्छन ।‘ म पसलबाट निस्किएं । बाहिर बसेको युवक नसकिने भयो आजभोलीका केटीहरुलाई भन्दैथियो । म सुनेको नसुन्यै हिंडिदिएं । उनिहरुले सायद मेरो निक्कै कुरा काटे होलान ।
काटे के त ? म आफुलाई चाहिने जे सुकै कुरा किन्न सक्छु नि । किन मान्छेहरु जाबो कण्डोम पनि केटीले किन्दा चाँही गैह्र कानुनी काम भए जत्तिकै गर्छन ? यस्तै सोच्दै म आण्टीको घर पुगें ।भोलीपल्ट बिहान सबेरै हामी फर्कियौं । साँझतिर घर आईपुग्दा मलाई साह्रै खुशी लाग्यो । मलाई आफ्नो गाउँ भन्दा प्यारो अरु कुनै ठाउँ पनि लाग्दैन । सबैलाई त्यस्तै हुँदो हो । केहि दिनको लागी म कतै गएं भने कहिले आफ्नो घरगाउँ फर्कनु जस्तो लाग्छ मलाई । प्रत्येक साँझ घाम अस्ताउंदा र प्रत्येक बिहान घाम झुल्किंदा मलाई आफ्नै घरगाउँमा हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अझ त्यसमाथी यो पल्ट विकाश संगको भेटमा हुने आनन्ददायि यौनकृडाको कल्पनाले मलाई त्यसै त्यसै पुलकित बनाएको थियो ।
एकदिन त्यसरी नै छट्पटीदै म कोठामै बसिरहेकि थिएं । बुबा सधै झैं आजपनि बिहानै अफिस जानु भएको साँझमा मात्रै फर्कनु हुन्थ्यो । आमा पनि आज किनमेल गर्न बजार जानु भएको थियो । फर्कन आमालाई पनि निक्कै समय लाग्थ्यो । भाई साथीहरु संग मिलेर गुलेली खेल्न कुन मुलुक पुगेको होला । छुट्टी छ आजभोली त्यसको स्कूल पनि , त्यसैले खेल्नमा मस्त हुन्छ दिनभर साँझ गाँस टिप्न आईपुग्छ । म घरमा एक्लै थिएं । ब्यागबाट कण्डोमको प्याकेट निकालेर हेर्दै मनमनै बेकारै हुनेभयो भन्दैथिएं । एक्कासी तलबाट विकाशले बोलाएको जस्तै लाग्यो । भ्रम होला । विकाशको बारेमा धेरै सोचेर मलाई प्राय यस्तै भ्रम हुन्छ ।
फेरी विकाशकै आवाजले मलाई बोलाएको सुनें । झ्यालबाट तल चिहाएर हेर्दा विकास आँगनबाट मेरै झ्याल तिर हेर्दैथियो ।मेरो खुशीको सिमा रहेन । विकाशलाई माथी बोलाएं । उ कोठाभित्र छिर्नासाथ म उसलाई अंगाल्न पुगें । विकाश संग मलाई उठेको रिस मरिसकेको थियो तर उ पो म संग रिसाएको रहेछ । ‘ सानी तिमीले यो के लेखेको ? कति सम्झाउंदा पनि नमान्ने तिमी त । ‘ उसले यौटा कागजको टुक्रामा मैले उसैलाई लेखेको प्रेमको चिठ्ठी देखाउंदै भन्यो , ‘ दिदीले सबै हेर्नु भएछ । मलाई त दिदीले पो दिनु भएको । धन्न घरमा कसैलाई भनिदिनु भएन ।‘त्यो चिठ्ठी मैले विकाशको कापीमा लेखेको थिएं र विकाशलाई पुर्याउन गएको दिन कुसुम दिदीलाई छोडेर आएको थिएं । त्यतीबेला मलाई त्यो कापीभित्र चिठ्ठी लेखेको छु भन्ने होस नै भएनछ ।
विकाशलाई अंगालोमा कस्दै मैले भनें , ‘ तिम्री दिदीले मलाई बुहारी भन्न हुन्छ भने मैले वहाँको भाईलाई चिठ्ठी लेख्न हुंदैन ? ‘विकाशले मलाई अंगालो हालेर उचाल्दै मेरो पलङ्गमा बसायो । उसको नजर टेबलमा मैले राखेको कण्डोममा परेछ । के के न भए जस्तै गरेर भन्यो , ‘ अरे यो काँ बाट आयो ? ‘‘ मैले किनेर ल्याएकि नि , तिमी किन्छौ कि किन्दैनौ भनेर ।‘ उसले तुरुन्तै आफ्नो खल्तीबाट कण्डोम निकाल्दै भन्यो , ‘ ल्याको थें नि मैले पनि ।‘उसले जिन्सको पाईण्ट लगाएको थियो । त्यसैमाथी बाट उसको लिंग सुम्सुम्याउंदै मैले भनें , ‘ आज काम लगाउनु पर्छ यस्लाई । ‘वयस्क भै सकेपछि को यो हाम्रो दोश्रो मिलन थियो । पहिलो मिलनमा भन्दा आज अलि बढि अनुभवी भएझैं देखिन्थ्यो विकाश । आज मैले कुर्ता सलवार लगाएकि थिएं ।
कुर्ता माथिबाटै मेरा कसिएका दुई स्तन खेलाउदै हुन्छ भन्यो र मेरो गर्दन तिर चुम्न थाल्यो । त्याँहा त्यतीबेला कोहि आउलान भन्ने मलाई डर चिन्ता थिएन । मैले तलबाट माथितिर सोहोरेर कुर्ता फुकालें । महिनौं सम्म कारावासको सजाय भोगेर उन्मुक्ती पाए झैं मेरा दुई स्तनहरु आजाद भए तर लगत्तै फरार कैदी प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेझैं दुबै स्तनहरु विकाशको पञ्जामा गिरफ्त भए ।म विकाशको पाईण्ट खोल्ने उपक्रममा थिएं । बटनहरु मैले खोलिसकेपछि विकाशले आफैं पाईण्ट उतार्यो । उसको टाईट पाईण्टसंगै अण्डर वेयर पनि निस्किएर जाँदा विकाशको लिँग रिसाएको गोबन सर्प फणा फुलाएर दुलोबाट निस्किएझैं मलाई झस्काउंदै म तिर तेर्सियो ।
उसको गतिलो लिँग देख्नासाथ म मा चुस्ने ईच्छा भएर होला मेरो जिब्रोको फेदतिरका सम्पुर्ण र्‍याल ग्रन्थीहरु रसाएर मुखभरी पानी भरिएर आयो तर आजको हाम्रो अभिष्ट त्यो थिएन त्यसैले उसको लिँगलाई हातले मुसारेर उसलाई पलङ्गमा तानें र भनें , ‘ विकाश म कण्डोम लगाईदिन्छु ल ? ‘विकाश मेरो सलवारको ईँजार खुस्काउंदैथियो , बोल्यो , ‘ हैन म आफैं लगाउंछु । ‘ उसले मेरो चिप्लो कपडाको सलवार खुट्टातिरबाट तानेर फुकालिदियो र पेण्टीमाथीबाटै केहि माथी उठेको मेरो योनिलाई सिँगो समोसा टोक्नखोजे जस्तै गरेर बिस्तारै टोक्यो र चुम्दै भन्यो , ‘ सानी आज किन तिम्रो भुत्ला घोच्ने भएको ?’मैले भर्खरै कैंची लगाएर योनि क्षेत्रका रौंहरु हल्का छाँटेकि थिएं त्यसैले अलि दह्रो भएर होला मेरा रौंहरु पेण्टी छेडेर बाहिर निस्किन खोज्दै गरे जस्ता देखिन्थे । ‘ मैले छाँटेकि थिएं नि त । साह्रो घोच्यो र ? ‘ मैले सोधें ।‘ हैन अलि बिझाउने भएछ ।
‘ विकाशले मेरो पेण्टी तल सोहोर्दै भन्यो । म सर्बाङ्ग नाङ्गी भएकि थिएं । यौनकृडामा हामी दुई न त अनभिज्ञ थियौं न त पारंगत । प्रकृतीले नै सिकाउने यस्तो कलामा भन्नु पर्दा हामी दुबै शिकारु थियौं । मैले विकाशलाई उसको टी शर्ट फुकाल्न भनें , ज्ञानी बालकले झैं उसले आफ्नो टी शर्ट खोल्यो र फेरी मेरो योनिमै मुख गाड्न थाल्यो । उ आफ्ना दुई ओठहरुले च्यापेर ढाडीएको किसमिस जस्तो मेरो भगशिश्न चुस्तै थियो । म उन्मादले छट्पटीन थालें । मेरो मुखबाट उन्मादका उदगारहरु निस्किन थाले । म मा सकेसम्म छिट्टो रतीराग अलाप्ने धून सवार थियो त्यसैले विकाशलाई छिट्टो गर्न भनें । विकाशले कण्डोम झिकेर आफ्नो लिँगमा लगायो र म माथी चढ्न आयो ।
मैले उसलाई सजिलो पार्ने हेतुले तिघ्रा फारेर उत्तानो सुतेको अवस्थामै केहि चटपटाएर आफ्नो शरिर मिलाएं । त्यसै त उत्तेजनाले पानी पानी भएको मेरो योनि त्यसमाथी विकाशको लिँगमा चिप्लो तैलिय पदार्थ सहितको कण्डोम , मलाई एकै झट्कामा विकाशको लिँग मेरो योनिभित्र फेदै सम्म छिर्छ जस्तो लागेको थियो तर कहाँ त्यस्तो हुंदो रहेछ र ? क्रमैसंग अलि अलि गर्दै विकाशको लिँग मेरो योनिभित्र छिर्दै थियो । उसको लिँग मेरो योनिभित्र पसिरहँदा मलाई केहि पिँडाको महसुस भै रहेको भए पनि त्यो पिँडा मिठासपुर्ण थियो ।विकाश मेरो शरिरमा लपक्कै टाँसीएर मच्चिईरहेको थियो । मुखमा मुख जोडेर हामी एक अर्काको जिब्रोको स्वाद पनि लिँदै थियौं । केहिबेरको परिश्रम पछि विकाश स्खलित भएछ । उ सायद उसैले सोचेको भन्दा छिट्टो स्खलित भएछ क्यार असंतुष्टी पुर्ण स्वरमा बोल्यो , ‘ ला सानी मेरो त झर्न थाल्यो ।‘ यता मेरो भने तिर्खा अझै बाँकी थियो । मलाई विकाशले अझै निक्कै बेर मेरो पलङ्गको डसनामै भासिने गरेर माथिबाट तल मच्चिएर थिचिरहे हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैथियो । विकाशले उसको लिँग मेरो योनिबाट झिक्यो ।
उसको लिँगमा भएको कण्डोम विर्यको तापले पग्लिएर टुप्पोमा स सानो कचौरीमा भरी हुने जति विर्य सहित लिँग देखि तल झुण्डिएको अवस्थामा थियो ।‘ ए ! त्यो त भएनछ नि , तिमीले लगाउन जानेनौ कि क्या हो ?’ मैले भनें । ‘ खै होला । मैले लगाउनै नजानेर हो कि यो लगाएर मज्जा नै आएन ‘ , होसियारी पुर्बक आफ्नो लिँगबाट कन्डोम झिक्दै विकाश बोल्यो , ‘ काँ फाल्ने यस्लाई ? ‘उसको लिँगमा भएको कडापनमा अलि ह्रास आएझैं थोरै लत्रीएको देखिन्थ्यो । ‘ त्यहिँ राखन म भरै फाल्छु ।‘ मैले भनें ।विकाशले यौटा प्लास्टिकको थैलामा प्रयोगमा आईसकेको कण्डोम राख्यो । मैले उस्लाई फेरी पलङ्गमा तानें र भनें ‘ विकाश मलाई त भकै छैन फेरी गरौं न । ‘ उ अलि असमञ्जसमा परे झैं देखियो ।
मैले उसमा उत्तेजना भर्ने हिसाबले एकहातले उसको लिँग खेलाउंदै जताततै उसलाई चुम्न थालें । उसको पनि संभोगको ईच्छा पुर्ती भै सकेको थिएन होला उ पनि मेरा दुबै स्तनका मुण्टोहरु पालै पालो चुस्न थाल्यो । हामीबिच एक प्रकारले चुस्ने प्रतिस्पर्धा भयो । यहि क्रममा विकाश मेरो योनि मै पुगेको थियो , मैले पहिले देखि नै नोटिस गरेकि थिएं विकाश मेरो योनि चुस्न निक्कै सिपालु छ अनि निक्कै मन गर्छ पनि । म पनि उसको लिँग चुस्न थालें । केहि बेरमा मैले आफ्नो मुखभित्र उसको लिँगमा कडापन आएको महसुस गर्दैथिएं । एक्कासी उसले आफ्नो मुख मेरो योनिबाट हटायो र मलाई पल्टाएर घोप्टो फर्कायो । उसले दुबै हातले मेरो कम्मरमा कस्सेर समात्दै मेरो कम्मर मुनिको भागलाई केहि उचालेर मेरो योनिमा पुन लिँग पसाउन थाल्यो । म स्वत उसलाई सजिलो हुने आसनमा बसें । मेरो छाती देखि माथी टाउको सम्म डसनामा जोतिएको थियो भने तलतिर तिघ्रा अलि फारिएको अवस्थामा घुँडा टेकेकि थिएं । फेरि नयाँ जोसको साथ विकाश मलाई धकेल्दै थियो ।
अहिले मलाई अझै धेरै पिँडा भै रहे पनि म त्यो सब सहन तयार थिएं । विकाशले यो पल्ट कन्डोम लगाएको थिएन । मैले उसलाई सोधें ‘ विकाश अर्को कण्डोम किन नलगाएको ? म आमा भएं भनें ? ‘ विकाश मलाई अझै जोडले धकेल्दै बोल्यो , ‘ भयौ भने म बाउ हुन्छु । ‘ मलाई संयमित हुन सिकाउने विकाश संभोगको दौरान आफैं बहकिएको थियो । प्रेममा मान्छे अन्धो हुन्छ भनेको यस्तै होला सायद । अहिले भने विकाशको लिँग फेदै सम्म मेरो योनिभित्र पसेको झैं लाग्दैथियो मलाई । म मेरो योनिको गालाहरुमा उसको दुई सुपारीका दानाहरु महसुस गर्दैथिएं । संभोगको चरम सुख भोग्दै थियौ हामी । यो पल्ट हामीदुबैको स्खलन हुने समय पनि एकै चोटी परेछ । गाईको बाच्छाले माउको थुन चुस्ता मुखको दुई कुनाबाट गजगजी फिँज काढे झैं बिकाशको लिँगले मेरो योनिमा घर्षण हुँदा मेरो योनिको कापहरुबाट पनि हामी दुबैको विर्यको फिँज गजगजी आएको थियो ।
अन्तत हामी दुबैको जोस सेलाउंदै गएर मच्चिने क्रम रोकियो । हामीलाई एक अर्काको अँगालोबाट कहिल्यै नछुटिनु परे हुन्थ्यो जस्तै भै रहेको थियो । केहि बेर पछि म उठेर कपडा लगाएर तल झरें । आँगनको छेउमा ट्युब वेलको नजिक थियो हाम्रो बाथरूम , त्यहाँ पसेर छिट्छिटो नुहाएर म कोठामा आएं । विकाश आफ्नो कपडा लगाएर हाम्रो चर्तिकलाले खज्मजिएको पलङ्गको कपडा मिलाईओरी पलङ्गमै लडिरहेको थियो । म कोठामा पस्ने बित्तिकै मलै फेरी पलङ्गमै तानेर मेरो ओठ चुस्न थाल्यो विकाश । मैले पनि केहि बेर उसलाई साथ दिएं र चिया बनाउने बहानामा तल झरें । पछि पछि आउंदै गरेको विकाश बोल्यो , ‘ सानी अब कहिले हामी यसरी भेट हुने होला ? ‘ उसको अनुहारमा हामी बिछोडिनु पर्ने पिँडाका भावरेखाहरु थिए । उ पढ्नलाई पुने जाँदैथियो म काठमाण्डौ ।
हाम्रो भेट हुने संभावना नै थिएन । मैले अलि रिसाएको अभिनय गर्दै भनें ‘ काठमाण्डौ पढ्न जान्छु भनेर पुने तिर एडमिशन गर्नु पर्छ अनि भेट भै हाल्छ नि ।‘ याचना मिश्रीत स्वरमा विकाशले भन्यो ‘ म के गरौ त सानी , मैले त काठमाण्डौ नै पढ्छु भनेको नि , बाबाले मान्नु भएन । ‘‘पुने गएर मलाई नबिर्षिनु नि फेरि , फोनमा , च्याटमा अनि ईमेलमा कुरा गर्नु पर्छ । ‘ मैले सम्झाएं विकाशलाई । ‘ हुन्छ तर म त तिमी बिना पागल हुन्छु होला सानी । ‘‘ तिमी मात्रै पागल हुने हो र ? म पनि पागल हुन्छु होला नि , तर कुरा गरिरहनु पर्छ नि त्यस्तो हुँदैन ।‘ मैले सम्झाएं । उसले अब एकदुई दिन भित्र मौका मिलेन भने यो अन्तिम किस है भन्दै मलाई गहिरो चुम्बन गर्यो । मैले चिया पिएर जाउ भन्दै गर्दा नमानेर भारी मन सहित उ घर फर्कियो ।
Also Read :यसरी गर्छन् कलेज गर्लहरु रोमान्स - nepali lado ra puti chikeko katha
म चिया बनाउन भान्सामा छिरें - मन त मेरो पनि भारी नै थियो ।जतिसुकै नछुट्टीने कोसिस गरेपनि समयको अगाडी हाम्रो के लाग्थ्यो र ? समयलाई बसमा राख्न कहाँ सक्थ्यौं र हामी ? म काठमाण्डौ जानुभन्दा हप्तादिन अगाडी नै विकाश पुनेतिर गयो । विकाशलाई बिदा गर्न म बस स्ट्याण्डसम्म जान पाउने संयोग परेको थियो उध्येश्य भने काठमाण्डौको लागी आफ्नो टिकट बुक गर्नु थियो । छुट्ने बेलातिर विकाशको रुञ्चे अनुहार देखेर मेरो मन पनि भक्कानिएर आएको थियो ।
हामी त्याहाँ एक अर्काको अंगालोमा कसिएर बिदाईको चुम्बन साटासाट गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनौं । केवल सजल नेत्रले एकअर्कालाई हेरेरै हामी बिदा भयौं । त्यसबेला मलाई कुनै गीतको अँश याद आईरहेथ्यो - ‘ समयनै ईश्वर हो समयले हिंडाउंछ तिम्रो मेरो अलग बाटो दोबाटोले छुटाउंछ ….’ तर हाम्रो परिस्थितीमा अहिले दोबाटो आएको भएपनि मिलनको दृढ संकल्प त छँदैथियो गाउँमा चौबिसै घण्टा विकाश संगै टाँसिएर त बस्दिनथें म फेरीपनि गाउँमा विकाश छैन भन्ने थाहा भएपछि गाउंनै शुन्य लागेको थियो मलाई । मन त्यसै बिरक्तिएर आएको थियो ।
एक साता मुश्किलले काटेर म काठमाण्डौ आएं । कलेज शुरु भै सकेको थियो । काठमाण्डौ आउनासाथ यो पटक मलाई केहि बिसञ्चो भएको भएपनि दुईदिन जती आराम गरेर ठिक भएकि थिएं । तेस्रो दिन बिहानै म कलेज जानलाई बस कुरीरहेकि थिएं मेरो नजिकै कसैले बाईक रोक्यो र म तिरै संबोधित भएर बोल्यो , ‘ तपाईंलाई म कहिं छाडीदिन सक्छु ?’ ‘ नो थ्याङ्क्स । मेरो बस आउंछ । ‘ उ तिर खासै ध्यान नदिएर मैले भनें । उसले आफ्नो टाउकोबाट हेल्मेट उतार्दै भन्यो , ‘ तपाईँ यतै कतै बस्नुहुन्छ ? निक्कैदिन भयो मैले तपाईंलाई नदेखेको । भेट्छु भन्ने त लागेको थियो ; आज भेटें ।” हेल्मेट उतारे पछि त्यो मान्छेलाई मैले कहाँ भेटे जस्तो कहाँ देखे जस्तो लागेको थियो । म चुपचाप उसलाई सम्झने कोसिसमा थिएं । मेरो बस आयो र म बसमा चढें । कलेज पुगुञ्जेलसम्म मलाई त्यो मान्छेले सम्झनामा पछ्याईरहयो ।
Also Read Maile mero Mama ko Chori ko nepali puti chikeko katha
कहाँ देखेकि थिएं त्यो मान्छेलाई भनेर मैले सम्झनै सकिनं । भेट्छु भन्ने त लागेको थियो ; आज भेटें उसको पछिल्लो बाक्यले मलाई उसको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । मैले त कहिल्यै उसलाई भेटे जस्तो लाग्दैन , उसले मलाई कहाँ देख्यो होला र भेट्छु भन्ने लागेको होला । दिनभरी मनमा यस्तै खुल्दुली भईरहयो ।अर्कोदिन पनि बिहानै बस पर्खिरहँदा उ बाईकमै देखापर्यो । आज उसको हेल्मेट बाईकमा पछाडी राखेको थियो । मैले उसलाई अझै सम्झन सकेकि थिईनं तर उ भने जन्मौं देखिको परिचित झैं परैबाट मुस्कुराउंदै मेरो छेउमा आयो र मेरो नाम सोध्यो ।‘ सानी । ‘ मैले आफ्नो नाम बताएं । उ किन यसरी मेरो पछि परिरहेको छ ? लव एट फर्स्ट साईट भनेझैं भएको हो कि उसलाई । उ आफुपनि ह्याण्डसम थियो । म पनि कहिं कतै उ प्रति आकर्षित भएकि थिएं कि ? हामीबिच कहिं केही त पक्कै पनि हुनु पर्थ्यो तर कहाँ के थियो मैले बुझ्नै सकिरहेकि थिईनं ।
‘सानी त तिम्रो घरको बोलाउने नाम पो होला नि , हैन र ? जे होस राम्रो नाम छ । म रिनभ । तिमीलाई भेटेर खुशी लाग्यो । ‘ उसले म तिर हात बढायो । मैले पनि उ संग हात मिलाउंदै धन्यवाद मलाई पनि खुशी लग्यो भनें । मेरो बस आईसकेको थियो । म जान्छु ल भन्दै बसमा चढ्न अघि बढें । ‘ म पनि एभरेष्टमै पढ्छु । संगै जाने हो ? ‘ उ भन्दैथियो । म बसको ढोकामा पुगीसकेकि थिएं । भित्र छिर्दै म बोलें , ‘ हैन बस नै ठिक छ । थ्याङ्क्स दो । ‘बसभित्र हिंजैमात्र चिनेकी साथी अनिता थिई । म उसैको छेउमा बसें । ‘ रिनभलाई तिमीले कहिले देखि चिनेकी ? ‘ उसको नजिक बस्नासाथ उसले मलाई सोधि । ‘ अहिले भर्खरै । किन र ? ‘ जवाफ दिएर मैले पनि सोधें ।‘ त्यसै । ‘ उसले बताउन चाहिन । केहिबेर चुपलागेर फेरी उ बोली , ‘ यु आर लक्की सानी । आई फील जेलस टु यु । ‘ उसको बोली केहि मधुरो थियो । ‘ ह्वाई ? ह्वाई यु फील जेलस टु मी ?’ मलाई जान्ने उत्सुकता भयो । ‘आई विल टेल यु लेटर , नट नाउ । ‘ अनिताले भनी ।‘ आई नो अनि , ह्वाई यु फील फील जेलस टु हर । ‘ पछाडीबाट अर्को केटा बोल्यो ।
उसले अनितालाइ अनि मात्रै भन्दोरहेछ । उसले अनि भनेको मलाई राम्रो लाग्यो । ‘ उड यु प्लीज सट अप अवि ? ‘ अनिता बोली । अनिताले पनि उसलाई अवि भन्दा उनिहरु निक्कै घनिष्ट हुन भन्ने बुझिन्थ्यो अथवा उसको नाम अवि मात्र पनि होला ।‘ सानी , दिस बास्टर्ड ईज अविनास । अवि सि इज सानी । ‘ मैले उनिहरुको निकटताको बारेमा सोच्दै गर्दा अनिताले हाम्रो परिचय गराई । `वावो , ह्वाट अ नेम , सानी । ईज दिस योर न्वारानको नेम सानी ? ‘ अविनासले मलाई जिस्काउने शैलीमा भन्यो । बसमा भएका अरुपनि हाँसे । ‘ इज दियर एनि प्रोब्लम विद माई नेम ? ‘ म अविनास प्रति आक्रोशित भएर बोलें । ‘ इन्डिड माई नेम इज सुप्रिया अन माई आईडीज बट आई लाईक सानी मच बेटर ।‘‘ ओके सानी , आई विल कल यु सानी अलवेज ।‘ अविनास भन्दैथियो । वरिपरीका सबै हात हल्लाएर कोहि हाई सानी आई एम सुमित्रा , कोहि हाई सानी आई एम जेम्स , कोहि हाई सानी आई एम एन्जी…….. भन्दैथिए । मैले सबैलाई हात हल्लाएर हाई भनें ।
हाई हेल्लो भन्नलाई कलेजमा मेरा धेरै साथीहरु भैसकेका थिए तर घनिष्ठता भने अनिता संग थियो । एकदिन लाईब्रेरीमा दुईजना मात्र भएको बेला अनिताले सोधी , ‘ सानी उड यु माईण्ड ईफ आई से समथिङ्ग टु यु ? ‘ मैले भनें , ‘ अफ कोर्स यस । ईफ यु से समथिङ्ग ब्याड टु मी । ‘एकछिन हामी दुबै हाँस्यौं । अनिताले फेरी भनी , ‘ आई एम सिरियस सानी , मैले साँच्ची भनेकि । ‘ उ गंभिर देखिई । ‘ म पनि सिरियस छु सानी । क्यारी अन । ‘ गंभिर बन्ने प्रत्यत्नमा मैले भनें ।‘ यु नो आई……… आई लभ रिनभ एण्ड नाउ आई अफ्रेड द्याट हि ईज पेईङ एटेण्सन टुवार्ड यु । ‘ अनिता मैले भरोसा गर्ने यौटैमात्र साथी । उस्लाई रिनभले मलाई मन पराउंछ भन्ने चिन्ता रहेछ । मलाई कता कता रिस उठे पनि यो कुरालाई सामान्य रुपमा लिएं मैले । म यौटा असल साथी गुमाउन चाहन्नथें । रिनभसंग मेरो त्यस्तो केहि छैन भनेर मैले अनितालाई संझाएं ।
मैले विकाशको बारेमा पनि उसलाई भनें । सकेसम्म उसलाई विश्वास दिलाएर म ढुक्क थिएं तर त्यस रात अबेर सम्म मेरो मनमा कस्तो बेचैनी रहिरह्यो । भोलीपल्ट मेरो निन्द्रा खुल्दा अबेर भै सकेको थियो । कलेज छुट्ला भनेर हतार हतार गरेर बाहिर निस्कंदा बस छुटिसकेको थियो तर म संधै बस चढ्ने ठाउँमा रिनभ मलाई नै कुरेझैं बसिरहेको थियो । मलाई देख्नासाथ उ बोल्यो , ‘ ढिलो भयो ? आउ संगै जाउं । ‘ म संग बिकल्प थियो पनि होला , जसोतसो म ट्याक्सी गरेर कलेज जान त सक्थें तर त्यसको लागी लाग्ने खर्च जोगाउन सके मलाई क्याण्टीनमा खर्च गर्न हुन्थ्यो त्यसैले म चुपचाप उसको बाईकमा पछाडी बसें । केहिबेर नबोलेरै हामी अगाडी बढिरहयौं । केहि अगाडी पुगेर यौटा पसलको अगाडी बाईक रोक्दै उसले भन्यो , ‘ सानी म सिगरेट लिईहालुं है ।‘ मलाई आपत्ती थिएन म बाईकबाट ओर्लिएर छेउमा उभिएं ।
उ चुपचाप पसलमा गयो र एक प्याकेट सिगरेट लिएर फर्क्यो । बाईक स्टार्ट गर्दै बोल्यो उ , ‘ सानी तिमीलाई थाहा छ यो पसल ? ‘‘थाहा छैन त ।‘ केहि नसोचिकनै उसको पछाडी बस्दै म बोलें ।‘मैले तिमीलाई यहि पसलमा पहिलो चोटी भेटेको । ‘‘ हो र ? कहिले ? ‘ हाँस्दै बोलें म ‘ मलाई थाहा छैन । ‘‘ भुल्यौ होला तिमीले तर म त्यो भेट कहिले भुल्न सक्दिनं । तिमी त्यसदिन कण्डोम किन्दैथियौ । ,‘ओ माई गड ! ‘ मनमनै बर्बराएं म । ‘ मैले कण्डोम किन्दा पसल बाहिर बसेर चुरोट तान्ने केटा ?’‘ साँच्ची कस्को लागी किनेको तिमीले ? ‘ मेरो मौनता भंग गर्दै रिनभले सोध्यो ।‘ आफ्नै लागी । तर तिमीलाई किन चासो नि मेरो ब्याक्तीगत कुरामा ? ‘ आपत्ती जनाएं मैले ।‘ हैन त्यस्तो केहि हैन । सोधेको नि । ‘ एकछिन चुप लाग्यो उ ।‘ त्यही भएर तिमी मेरो पछि लागेको ? तिमीलाई म त्यस्तो खालको केटी लाग्यो ? ‘ मैले अली कडा बन्ने हिसाबमा भनें ।‘ हैन यार तिमी मलाई गलत बुझ्दैछौ । मलाई त त्यही दिन तिम्रो तर्कशक्ती देखेर पो तिमी मन परेको । म तिमीलाई मन पराउंछु सानी तर मलाई गलत नबुझ । तिमीले मलाई मन पराउंदैनौ भने पनि ठिकै छ ।
Also Read : Mero Bhauju ko Rato Puti chikeko nepali youn katha : Nepali Sex Story
मैले मन पराएको मान्छेले मलाई पनि मन पराउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । ‘ रिनभले एकै सासमा उसको मन राख्यो । कति सजिलो कसैको अगाडी मन राख्न ? सहरबजारका केटाहरुलाई केटी मन पराउनु भनेको कुनै सिनेमा मनपराउनु जस्तो हो कि क्या हो ? हामी कलेज पुगीसकेका थियौं । कलेजभित्र म रिनभसंग छिर्दा धेरैले देखे । उनिहरुले सायद गलत अर्थ लगाए होलान । मलाई अनितालाई यो सबै कुरा सुनाउन मन थियो तर उ हामीलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गरेर अर्कोतिर गई । उ रिसाई होला जस्तो लाग्यो र मैले बोलाएं पनि तर उ सुनेको नसुने झैं गई । क्लासरुमभित्र संगै बस्ने अनिता मसंग नबसेर पछाडी गएर बसी । ब्रेक हुनासाथै मैले उसलाई बोलाएं तर उसले सबैको अगाडी मेरो बेईजत गर्दै भनि , ‘ यु फ्रिकिन विच । हाउ डेयर यु टेक राईड विद रिनभ ? आई अलरेडी टोल्ड यु रिनभ ईज माई ब्वाई फ्रेण्ड । आ‘म सरी विच , यु आर नो मोर माई फ्रेण्ड ………….. ‘ अनिताले मेरो कुरै सुनिन । एकोहोरो मलाई गाली गरिरही । निक्कै सिपालु रहिछे उ झगडा गर्न । मैले केहि भन्नै सकिनं न त मन थाम्नै सकें ।
म क्लासरुममा सबैको अगाडी रोएं ।म रोएको देखेर केहि हाँस्नेहरु थिए । केहि मलाई सम्झाउंदै थिए । सम्झाउनेमा अविनाश पनि थियो । मसंग अरुभन्दा अलिबढि घुलमिल भएको नाताले त्यसबेला मेरो सहारा बन्यो अविनाश । ‘ म घर जान्छु । आज क्लास लिन सक्दिनं । ‘ मैले ट्याक्सी बोलाउन अविनाशको सहयोग मागें । मेरो क्लासमा बस्न सक्ने स्थिती पनि थिएन । अविनाश मलाई बाहिर सम्म छोड्न आयो । दुईतिन दिन सम्म म कलेज जान सकिनं । जानै मन लागेन । मैले कलेज फेर्ने निर्णय गरेकि थिएं । एकदिन अविनाश र सुमित्रा मेरो घर आए र मलाई कलेज जान कर गर्न थाले । मैले उनिहरुलाई कलेज फेर्ने कुरा सुनाएं । उनिहरु दुबैजनाले मलाई गाली गर्दै सम्झाए ।
मैले अनिताको अगाडी हारेर हैन जितेर देखाउनु पर्छ भन्ने उनिहरुको मान्यता थियो । एक हिसाबले मलाई उनिहरुको कुरा ठिक पनि लाग्यो । रिनभले अनितालाई मनपराउंदैन र अनिताले म संग झगडा गरेको कुरालाई लिएर रिनभले अनितालाई गाली गर्यो भनेर पनि उनिहरुले मलाई सुनाए । मैले भोली देखि कलेज जाने बिचार गरें । भोलीपल्ट बिहान पनि अविनाश र सुमित्रा मलाई लिन आए । अविनाशले पनि नयाँ बाईक किनेको रहेछ , म उनिहरु संगै बहिर निस्कंदा थाहा भयो । ‘ आजदेखि हामी संधै बाईकमा कलेज जाने ।‘ अविनाशले भन्यो ।‘ तर तिम्रो बाईकमा तिनतिन जना कसरी जाने नि ? ‘ मैले जिज्ञासा राखें ।‘ ए , तिमी कहाँ मेरो अविनाशको बाईकमा जान पाउंछौ त ? तिम्रो बाईक उ त्यहाँ छ । ‘ सुमित्राले भनी ।सुमित्राले देखाएतिर रिनभ मुसुमुसु हाँस्दै थियो । उ बाहिर नै मलाई पर्खिरहेको रहेछ , बोल्यो , ‘ जान्छौ हैन मेरो बाईकमा ? ‘म रिनभको बाईकमा बसें । अविनाश र सुमित्रा अविनाशको बाईकमा थिए ।
अविनाशले अनितालाई मनपराउंथ्यो अनिताले रिनभलाई तर सुमित्राले अविनाशलाई मन पराउदिरहिछे यो मलाई थाहा थिएन र अहिले सुमित्रा र अविनाश जोडी बनिसकेछन । ‘ ब्यावहारले मान्छेलाई मान्छे देखि टाढा पुर्याउंछ । ‘ यो उखान चरितार्थ भएको थियो अनिताको जीवनमा । आजभोली उसको मिल्ने साथी थिएन । म संग बोल्न खोजुंला जस्तो गर्छे कहिलेकाहिं तर म उसलाई वास्ता गर्दिनं । हरेकदिन कलेज जाँदा रिनभ र अविनाश पर्खि पर्खि कलेजको बससंगै बाईक हिंडाउथे । अनितालाई देखाएर जलाउने उनिहरुको चाहना , मेरो पनि त्यही थियो कामना । म अनितालाई जलाउनकै लागी रिनभको पछाडी चपक्कै टाँसीएर बाईकमा बस्थें । रिनभसंग प्रेमको नाटक गर्दागर्दै मलाई रिनभ साँच्चै मनपर्न थाल्यो । सधैं रिनभलाई देखिरहन मन हुन्थ्यो ।आखिर प्रेम भन्नु पनि एक प्रकारले नशा न हो ।
मलाई रिनभसंग हिंड्ने डुल्ने नशा लागीसकेको थियो त्यही क्रममा सायद मलाई रिनभसंग शारिरिक संबन्ध राख्ने पनि उत्कट ईच्छा भएर आएको थियो । तर कहाँ कसरी म उसलाई यो कुराको प्रस्ताव राख्ने , अलमलमा थिएं । रिनभलाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ तर उसले पनि मलाई प्रस्ताव राख्न सकेको थिएन । एकदिन कलेजबाट फर्किंदै गर्दा रिनभलाई त्यही पसल अगाडी बाईक रोक्न लगाएं र भनें , ‘ रिनभ आज तिमी मेरो घरमा बस्ने ल ? म एक्लै छु घरमा । ‘रिनभ अलमल्ल पर्यो । उ प्रतिक्रियाविहिन देखेर फेरी मैले सोधें , ‘ हुन्छ कि हुन्न ? ‘‘ हुन्छ । भै हाल्छ नि तर तिम्रो आण्टीहरु ? ‘ ‘ वहाँहरु गाउँ जानु भएको छ । अंकलको घरमा कुन्नि कसको बिहे छ रे ।‘ मैले भने , ‘ तिमी केहि कण्डोम किनेर ल्याउंछौ ? ‘ यति भनेपछि मैले रिनभलाई म तिमिसंग सुत्न चाहन्छु अथवा तिमीसंग शारिरिक सम्बन्ध राख्न मन लागेको छ भनिरहनु परेन ।‘ हँ ! ‘ केहि झस्किएर रिनभ बोल्यो , ‘ हुन्छ म गएर आउंछु । ‘रिनभले त्यही पसलबाट केहि कण्डोम लिएर आयो ।
हामीलाई घरजानु हतार थिएन त्यसैले हामी घुम्न जाने मूडमा थियौं । ‘ भोली कलेज बिदा पनि छ बरु हामी कतै बाहिर जाउं न । ‘ रिनभले उपाय सुझायो , ‘ नगरकोट जाने हो ? ‘मलाई केहि आपत्ती थिएन । घर पुगेर एकरात बस्ने तयारीका साथ हामी बाटो लाग्यौं । बाटैभरी म रिनभसंगको यौनानन्दको कल्पनामा मस्त बनिरहें । त्यसै त ढिलो हिंडेका थियौ हामी त्यसमाथी बाटोमा पर्ने अरु ठाउं पनि घुम्दै आएका थियौ । त्यसैले हामी सांझमा मात्रै गन्तब्यमा आईपुग्यौं र यौटा लजमा बस्यौं ।रात जब म रिनभसंग यौटै बेडमा नग्न अवस्थामा थिएं मलाई विकाश याद आयो । उ के गर्दै होला ? मलाई उसको माया लागेर आयो । विचरा विकाश मलाई सम्झेर सुतेको होला यसबेला । म भने यो के गर्न जाँदैछु ? म विकाशलाई सम्झेर पुरानो यादमा हराईरहेको बेला रिनभ मेरो खुट्टाबाट मलाई चुम्न शुरुगर्दै माथि बढ्दै थियो । जब रिनभको मुख मेरो पेण्टीमाथीबाट मेरो योनिमा आईपुग्यो मैले विकाशलाई सम्झिरहन सकिंन ।
म उत्तेजनाको चरम उत्कर्समा थिएं । मेरा हातहरु आफ्नै स्तन निचोर्न ब्यस्त थिए । रिनभले उसको दाँतले टोकेर मेरो पेण्टी उतार्ने कोसिस गर्दैथियो मैले ढाड र कुर्कुच्चाको बलले आफ्नो योनिभाग उठाईदिएं । मेरो पेण्टी उतारेर रिनभ मेरो योनि चुस्न थाल्यो । आनन्दको यो क्षणले मलाई स्वर्गको अनुभुती दिलाईरहेथ्यो । मैले रिनभलाई तानेर बेडमा लडाएं र उ माथी चढेर उसको नाडीझैं कडा लिंग आफ्नो मुखमा लिएर चुस्न थालें । हामी एक अर्काको ठिक बिपरित थियौं । रिनभ मेरो योनि चुस्दैथियो म उसको लिंग । केहिबेर सम्म यो प्रक्रिया चलेपछि रिनभले मलाई कम्मरमा समाएर उचाल्दै बेडमा उत्तानो पारेर सुतायो र मेरो कानमा आएर फुस्फुसायो , ‘ सानी , तिमी तयार हो ? ‘ मैले उसको ओठमा एक चुम्बन दिएर मुस्कुराउंदै हो भन्ने संकेत दिएं । रिनभ म माथी चढ्न आयो । उसको शरिरको वजन मेरो शरिरमाथी पर्दा मलाई मसाज गराएझैं हुंदैथियो । मैले आफ्नो दुबै आखा चिम्लिएकी थिएं । मेरो हात रिनभको चौडा ढाड सुम्सुम्याउंदै थिए ।
रिनभले पनि उसको दुबै हातले मलाई कसिरहेको थियो । यो अवस्थामा उसको लिंग मेरो योनिमा सहजै पस्न सक्ने थिएन त्यसैले मैले मेरो एक हात उसको ढाडबाट हटाएर उसको लिंगमा लगें र उसको मोटो लामो लिंगलाई समाएर मेरो योनिको प्रवेशद्वारमा राखें । रिनभ मलाई भन्दैथियो , ‘ आखा त खोल । किन लाज मानेकि सानी ? ‘ मलाई कतिबेला रिनभको लिंग मेरो योनि भित्र प्रविष्ट हुन्छ र मेरो यौनाग्नी शान्त पार्छ भन्ने हतार भैरहेको थियो । मैले आखा खोलेर पुन रिनभको ओठमा आफ्नो ओठ जोड्दै भने , ‘ छिटो न । ‘ रिनभले हलुकासंग उसको लिंग मेरो योनीभित्र प्रवेश गराउन थाल्यो । उसले म माथी मच्चिएकै तालमा ताल मिलाएर म पनि तलबाट माथीतिर आफ्नो योनि भाग उठाउंदै उसलाई साथ दिन थालें ।यो अबर्णनिय आनन्दमा डुब्ने क्रममा हामीले ल्याएको कण्डोम पनि प्रयोग गर्न भुलेका रहेछौं । त्यसो त मलाई आफ्नो योनिभित्र कण्डोम रहित लिँगकै घर्षण मन पर्छ । सारा संसार बिर्षेर हामी त्यसरात झिमिक्कै नसुती पटक पटक यौनानन्दमा लीन भै रहयौं……
chikeko katha nagarkot Nepali Sex Story in Nepali Nepali Youn Katha yaun katha youn katha यौन कथा सेक्सी कथा